‘Isipho Sesisa Esingathethekiyo’ SikaThixo
“Makubulelwe kuThixo ngenxa yesipho sakhe sesisa esingathethekiyo.”—2 KORINTE 9:15.
Uthando lukaKristu lubangela senze ntoni?
Uthando lukaThixo lusinceda njani sithande abazalwana bethu?
Kutheni ukuxolela kukaThixo kumele kusenze sixolele abazalwana bethu?
1, 2. (a) Siquka ntoni ‘isipho sesisa esingathethekiyo’ sikaThixo? (b) Yiyiphi imibuzo esiza kuyiphendula kweli nqaku?
UYEHOVA wasinika esona sipho sikhulu sothando xa wathumela uNyana wakhe oyintanda uYesu emhlabeni! (Yohane 3:16; 1 Yohane 4:9, 10) Umpostile uPawulos wathi esi ‘sisipho sesisa esingathethekiyo.’ (2 Korinte 9:15) Kwakutheni ukuze atsho?
2 UPawulos wayesazi ukuba ukuncama kukaYesu ubomi bakhe kusisiqinisekiso sokuba zonke izithembiso ezimangalisayo zikaThixo ziza kuzaliseka. (Funda eyesi-2 kwabaseKorinte 1:20.) Loo nto ithetha ukuba ‘isipho sesisa esingathethekiyo’ sikaThixo siquka ukuzincama kukaYesu, nokulunga nothando olunyanisekileyo uYehova asibonisa lona. Ngangendlela esixabiseke ngayo esi sipho, kunzima nokusichaza ngendlela esinokuyiqonda ngokupheleleyo. Simele sivakalelwe njani ngesi sipho sikhetheke kangaka? Yaye esi sipho sinokusikhuthaza njani njengoko silungiselela iSikhumbuzo sokufa kukaKristu esiza kuba ngoLwesithathu, Matshi 23, 2016?
ISIPHO ESIKHETHEKILEYO SIKATHIXO
3, 4. (a) Uvakalelwa njani xa ufumana isipho? (b) Isipho esikhethekileyo singabutshintsha njani ubomi bakho?
3 Siyavuya xa sifumana isipho. Kodwa ezinye izipho zixabiseke kakhulu kangangokuba zingade zibutshintshe ubomi bethu. Ngokomzekelo, masithi uye waphula umthetho waza wafumana isigwebo sokufa. Kodwa kusuke kuvele umntu ongamaziyo othi uza kukufela. Esinjani sona isipho! Ufanele uvakalelwe njani ngesi sipho sikhetheke kangaka?
4 Isipho esikhetheke kangako singakwenza wenze utshintsho ebomini bakho. Sinokubangela nokuba ube ngophayo yaye ubathande abanye uze uxolele nabani na okuphatha kakubi. Ubomi bakho bonke ungafuna ukubonisa umbulelo ngeso sipho.
5. Isipho sikaThixo sentlawulelo sikhulu kangakanani kunezinye izipho?
5 Isipho sikaThixo sentlawulelo sikhulu lee kuneso sizekelise ngaso. (1 Petros 3:18) Khawucinge ngoku: Sonke sifumene isono kuAdam, yaye isohlwayo saso kukufa. (Roma 5:12) Uthando lwaqhuba uYehova ukuba athumele uYesu emhlabeni ukuze afele uluntu, “angcamle ukufa ngenxa yabantu bonke.” (Hebhere 2:9) Kodwa ukusifela kwakhe kuthetha okungakumbi kuthi! Kuza kuphelisa ukufa ngonaphakade. (Isaya 25:7, 8; 1 Korinte 15:22, 26) Bonke abo babonisa ukholo kuYesu baza kuba seluxolweni baze bonwabe ngonaphakade, enoba bangookumkani noKristu ezulwini okanye ngabalawulwa boBukumkani bukaThixo emhlabeni. (Roma 6:23; ISityhilelo 5:9, 10) Ziziphi ezinye iintsikelelo zesipho sikaYehova?
6. (a) Ziziphi iintsikelelo zesipho sikaYehova okhangele phambili kuzo? (b) Chaza izinto ezintathu isipho sikaThixo esiza kusibangela sizenze.
6 Esi sipho sikaThixo siza kubangela umhlaba ube yiparadesi, kuphiliswe abagulayo kuze kuvuswe nabafileyo. (Isaya 33:24; 35:5, 6; Yohane 5:28, 29) Siyamthanda uYehova noNyana wakhe oyintanda ngokusinika esi ‘sipho sesisa singathethekiyo.’ Esi sipho siza kusibangela senze ntoni? Siza kusibangela ukuba (1) sixelise uKristu Yesu ngokusondeleyo, (2) sithande abazalwana bethu, size (3) sibaxolele ngokusuk’ entliziyweni abanye.
“UTHANDO ANALO UKRISTU LUYASINYANZELA”
7, 8. Simele sivakalelwe njani ngothando lukaKristu, yaye lumele lusibangele senze ntoni?
7 Okokuqala, simele sifune ukuphila ngendlela ezukisa uYesu. Umpostile uPawulos wathi: “Uthando analo uKristu luyasinyanzela.” (Funda eyesi-2 kwabaseKorinte 5:14, 15.) UPawulos wayesazi ukuba xa silwamkela uthando olukhulu lukaYesu, luya kusibangela simthande yaye simzukise. Xa sikuqonda kakuhle oko uYehova asenzele kona, uthando lwakhe luya kusibangela siphile ngendlela emkholisayo uYesu. Sikwenza njani oko?
8 Ukuthanda uYehova kuya kusibangela sixelise umzekelo kaYesu, size silandele emanyathelweni akhe ngokusondeleyo. (1 Petros 2:21; 1 Yohane 2:6) Xa sithobela uThixo noKristu, sibonisa ukuba siyabathanda. UYesu wathi: “Lowo unemiyalelo yam aze ayigcine, nguye ondithandayo. Lowo undithandayo uya kuthandwa nguBawo, yaye nam ndiya kumthanda kwaye ndiya kuzibonisa ngokucacileyo mna kuye.”—Yohane 14:21; 1 Yohane 5:3.
9. Ngoobani abanokusiphembelela?
9 Kweli xesha leSikhumbuzo, kubalulekile ukucingisisa ngendlela esiphila ngayo. Khawuzibuze: ‘Ziziphi izinto esendimxelisa kuzo uYesu? Ndingaphucula phi?’ Kubalulekile ukuzibuza le mibuzo kuba ihlabathi lifuna siphile njengalo. (Roma 12:2) Ukuba asilumkanga, sinokuphenjelelwa ukuba sixelise ootitshala, abantu abadumileyo nabaphambili kwezemidlalo beli hlabathi. (Kolose 2:8; 1 Yohane 2:15-17) Yintoni enokusinceda bangasiphembeleli?
10. Yiyiphi imibuzo esinokuzibuza yona kweli xesha leSikhumbuzo, yaye ukuyiphendula kunokusibangela senze ntoni? (Jonga umfanekiso osekuqaleni.)
10 Kweli xesha leSikhumbuzo kubalulekile ukuhlola impahla yethu, iimuvi, umculo esiwuphulaphulayo, noko kukwiikhompyutha, iifowuni okanye iitablet zethu. Zibuze: ‘Ukuba uYesu ebenokuthi gqi aze abone into endiyinxibileyo, ngaba bendinokuba neentloni?’ (Funda eyoku-1 kuTimoti 2:9, 10.) ‘Ngaba iimpahla zam beziya kubonisa ukuba ndingumlandeli kaKristu? Ngaba uYesu ebeya kufuna ukubukela iimuvi zam? Ngaba ebeya kuwumamela umculo wam? Ukuba uYesu ebenokuboleka ifowuni okanye itablet yam, ngaba bendiya kuba neentloni ngezinto azibonayo? Ngaba bendiya kushwantshwatha into engavakaliyo xa uYesu endibuza ukuba kutheni ndiyithanda le midlalo yevidiyo?’ Ukuthanda kwethu uYehova kumele kusenze siyeke nantoni na engamfanelanga umKristu, enokuba siyithanda kangakanani na. (IZenzo 19:19, 20) Xa sasizahlulela kuYehova, sathembisa ukuba siza kuphila ngendlela emzukisayo uKristu. Ngoko asifanele sigcine nantoni na enokwenza kube nzima ukuba sixelise uYesu.—Mateyu 5:29, 30; Filipi 4:8.
11. (a) Ukumthanda kwethu uYehova noYesu kusinceda njani ekushumayeleni? (b) Uthando lunokwenza sibancede njani abanye ebandleni?
11 Ukuthanda kwethu uYesu kusenza sishumayele size sifundise ngenzondelelo. (Mateyu 28:19, 20; Luka 4:43) Ngexesha leSikhumbuzo, awunakuhlengahlengisa iimeko zakho ukuze ube nguvulindlela ongumncedani wenze iiyure eziyi-30 okanye eziyi-50 entsimini? Omnye umhlolo ona-84 wayecinga ukuba akanakukwazi ukuba nguvulindlela kuba emdala nempilo ingasavumi. Kodwa oovulindlela kwindawo ahlala kuyo babefuna ukumnceda. Bamlungiselela into yokukhwela baza bakhetha intsimi aza kukwazi ukusebenza kuyo. Ngenxa yoko, lo mzalwana wakwazi ukuzenza iiyure zakhe eziyi-30. Ngaba unokunceda umntu ebandleni lakho abe nguvulindlela ongumncedani ngoMatshi okanye ngoAprili? Ewe kona asinakuba ngoovulindlela sonke, kodwa sinokukwazi ukusebenzisa ixesha namandla ethu ngakumbi ekukhonzeni uYehova. Ukuba siyakwenza oko, njengoPawulos, siya kubonisa ukuba siqhutywa luthando lukaYesu. Yiyiphi enye into uthando lukaThixo oluya kusibangela siyenze?
12. Uthando lukaThixo lusibangela senze ntoni?
12 Okwesibini, uthando lukaThixo lumele lusenze sithande abazalwana bethu. Umpostile uYohane wathi: “Zintanda, ekubeni uThixo eye wasithanda ngolo hlobo, nathi simele sithandane.” (1 Yohane 4:7-11) Ngoko ukuba siyamthanda uThixo, simele sibathande nabazalwana bethu. (1 Yohane 3:16) Singabonisa njani ukuba siyabathanda?
13. UYesu wamisela wuphi umzekelo ngokuthanda abantu?
13 Umzekelo kaYesu ubonisa indlela esinokubathanda ngayo abanye. Xa wayelapha emhlabeni wanceda abantu, ingakumbi abo bathobekileyo. Waphilisa abagulayo, imilwelwe, iimfama, izithulu nezimumu. (Mateyu 11:4, 5) Ngokungafaniyo neenkokeli zonqulo, uYesu wayekuthanda ukufundisa abantu ababenomdla wokufunda ngoThixo. (Yohane 7:49) Wayebathanda abo bantu bathobekileyo waza wenza konke okusemandleni ukubanceda.—Mateyu 20:28.
Ngaba unganceda umzalwana okanye udade okhulileyo entsimini? (Jonga isiqendu 14)
14. Ungabonisa njani ukuba uyabathanda abazalwana bakho?
14 Ixesha leSikhumbuzo ikwalixesha elihle lokunceda abazalwana noodade abasebandleni, ingakumbi abakhulileyo. Ngaba unokubatyelela aba bathandekayo? Ngaba unokubaphathela ukutya, ubancedise kwimisebenzi yasekhaya, ubakhwelise ukuya ezintlanganisweni okanye ucele ukuhamba nabo entsimini? (Funda uLuka 14:12-14.) Uthando lukaThixo malukwenze ubathande abazalwana bakho!
YIBA NENCEBA KUBAZALWANA NOODADEWETHU
15. Yintoni esimele siyikhumbule?
15 Okwesithathu, uthando lukaYehova lusibangela sibaxolele abazalwana noodadewethu. Sonke sinesono yaye siyafa ngenxa ka-Adam, ngoko akekho onokuthi, “Andiyidingi intlawulelo.” Kwanoyena mkhonzi uthembekileyo kaThixo uyasidinga isipho sentlawulelo. Ngamnye wethu uxolelwe ityala elikhulu! Kutheni kubalulekile ukuyikhumbula loo nto? Impendulo siyifumana komnye wemizekeliso kaYesu.
16, 17. (a) Sifunda ntoni kumzekeliso kaYesu wokumkani namakhoboka? (b) Emva kokucingisisa ngomzekeliso kaYesu, uzimisele ukwenza ntoni?
16 UYesu wenza umzekeliso wokumkani owaxolela ityala elikhulu lekhoboka lakhe leedenariyo eziyi-60 000 000. Kodwa kamva, elo khoboka alizange limxolele umntu owayelityala kancinane, iidenariyo njee eziyi-100. Inceba kakumkani yayimele ilibangele elo khoboka limxolele loo mntu. Ukumkani wavutha ngumsindo akuva ukuba elo khoboka alilixolelanga ityala nje elincinane. Wathi: “Khobokandini lingendawo, ndakucimela lonke elaa tyala, xa wandibongozayo. Ubungafanele na ukuba ube nenceba nawe kwikhoboka elilidlelane lakho, njengokuba nam ndiye ndanenceba kuwe?” (Mateyu 18:23-35) Njengalo kumkani, uYehova uye wasixolela ityala elikhulu. Uthando nenceba kaYehova zimele zisibangele senze ntoni?
17 Njengoko silungiselela iSikhumbuzo, masizibuze: ‘Ngaba ukho umzalwana ondikhathazileyo? Ngaba kunzima ukumxolela?’ Ukuba kunjalo, eli lixesha elihle lokuxelisa uYehova, ‘okulungeleyo ukuxolela.’ (Nehemiya 9:17; INdumiso 86:5) Ukuba siyayixabisa inceba enkulu kaYehova, siya kuba nenceba kwabanye size sibaxolele ngokusuk’ entliziyweni. Ukuba asibathandi size sibaxolele abazalwana bethu, asinakulindela ukuba uYehova asithande aze asixolele. (Mateyu 6:14, 15) Xa sibaxolela abanye, oko akuyitshintshi into yokuba basikhathazile, kodwa kuya kusinceda sonwabe.
18. Uthando lukaThixo lwamnceda njani omnye udade wanyamezela ukungafezeki komnye?
18 Kunokuba nzima ukunyamezela ukungafezeki kwabazalwana noodadewethu. (Funda amaEfese 4:32; namaKolose 3:13, 14.) Omnye udade owakwenzayo oku nguLily.  (Jonga umbhalo osekugqibeleni.) Wanceda uCarol owayengumhlolokazi. Ngokomzekelo, wayemqhubela amse naphi na apho afuna ukuya khona, emncedisa xa eyokuthenga yaye emenzela nezinye izinto ezininzi. Kuyo yonke loo nto, uCarol wayesoloko egxeka, ibe ngamanye amaxesha kwakusiba nzima ukumnceda. Kodwa uLily wajonga iimpawu ezintle zikaCarol waza wamnceda kangangeminyaka de uCarol wagula kakhulu waza wafa. Nangona kwakunzima ukunceda uCarol, uLily uthi: “Ndikhangele phambili ekuboneni uCarol eluvukweni. Ndifuna ukumbona ukuba uza kuba njani xa efezekile.” Kucacile ke ukuba, uthando lukaThixo lungasinceda sibanyamezele abazalwana noodadewethu, size sikhangele phambili kwixesha laxa ukungafezeki kuya kube kungekho ngonaphakade.
19. ‘Isipho sesisa esingathethekiyo’ sikaThixo singakubangela wenze ntoni?
19 UYehova uye wasinika ‘isipho sesisa esingathethekiyo.’ Ngamana singasoloko sisixabisa! Ixesha leSikhumbuzo lixesha elihle lokucingisisa ngako konke oko uYehova noYesu basenzele kona. Ngamana uthando lwabo lungasenza sixelise uYesu ngokusondeleyo, sithande abazalwana bethu size sibaxolele ngokusuk’ entliziyweni.
^  (isiqendu 18) Amanye amagama atshintshiwe.
Ixesha leSikhumbuzo: Lixesha langaphambi, ebudeni nasemva kancinane kweSikhumbuzo. Ngamanye amaxesha liba ngoMatshi, Aprili noMeyi